Oromo News 06.18.21 | KWIT
Reynolds guyyaa kaleessa qarqaarsa Police irrati faramtee jirti. Sochii mormii murtaahe fi wanjalaa guddaa kan uf keessa qabuudha.
Olympian fi Sioux City native Shelby Houlihan har’aa dorgommii Amerikati hin dorgomani. Warri fiiydota akka social media irrati himanitti abukaato isaani akka jarri emergence injection fudhatan hanga deebi qorannoo drug waggaa afur booda deebiuf deebin kunis drug irraa qulqulluu tauu qaba. Wanni kun hin uumamne garuu gara fulduraati uumamu nimala. Houlihan qorannoo December osoo hin godhin seati 10 dura bakka pork burrito jedhamu tokkoti ittigaafatamummaa godhani jiru.
Walitti qabaan guyyaa sanbata bakka park tti guyyaa har’aa akka gabaasetti festival sirbaa kan waggaa irraa xiqqo akka jijjiire hime. Akka seera CDC haguugi fuula godhachuun filannoo abba akka taeefi addaan fageenya ufii eegachun akka barbaachisuu himan. Ticketii kan barbaachifne yoo tau garuu namni walgahuu dafee akka dhufu kan gaafatamaniidha.
Span waggaa kana kan Grandview park iraa July 2nd fi 3rd kan geggeefamuudha.
Guluffiin farad Atokand Park kan South Sioux City keessati akka qaraa irra kan karoorfame qabame July 10th beelamame jira.
Ho-Chunk Inc track qabame guyyaa sadihiif dorgommii ni godha.
Atokad hayyama kennuudhaf yoo xiqaate waggaati dorgommiin guyyaa tokko akka godhamu qabu himan.
Mana qumaara fulduraa waggaa sagalii banuudhaf Ho-Chunk fudhate jira. Karoorri sun erga filatame booda November keessa murtaahe jira. Ho-Chunk manneen qumaara South Sioux City, Lincoln, fi Omaha keessati guddisuu jira.